Spandex Latex ndeye latex firimu rinoumbwa jira, iro rakazvimiririra rakagadzirwa nekambani yedu. Inotora nano-rinoumbwa tekinoroji. Iine kukwirisa kwakakwirira pamativi ese mana, haisi nyore kutsemuka, haina kupinza mvura, uye ine basa rekudikitira remitambo nekusimba Iko kusimba kwayo ...Verenga zvimwe »
Kunobva gadziriro Sosi yepakati Indasitiri nekutengeserana kusangana B2B Vakasimba vagadziri, kudyidzana kwepasirese Kuyambuka-muganho kupa, kutakura kwepasirese (FedEx DHL UPS TNT ARAMEX) Kugadzirwa kweplate yekombuta, dhizaini yepakutanga, Mubhedha wekucheka komputa, chigadzirwa chemhando yekutarisa uye kuendesa, cen yebasa revatengi .. .Verenga zvimwe »
Yedu kambani imwe-yekumira bhizinesi sevhisi kambani inosanganisa yekugadzira machira, chigadzirwa dhizaini, kugadzira uye kutengesa. Chinhu chikuru chigadzirwa chinoshandisa yakazvimirira kutsvagisa nekuvandudza machira, senge spandex latex (mafuta pamusoro / girazi pamusoro), uchishandisa warp yakarukwa nylon lining, jira iri enviro ...Verenga zvimwe »
1.Pamusoro pekambani yedu Kambani yedu ndeye-yekumira bhizinesi kambani kambani inosanganisa kuvandudza machira, chigadzirwa dhizaini, kugadzirwa uye kutengesa. Chinhu chikuru chigadzirwa chinoshandisa yakazvimirira kutsvagisa nekuvandudza machira, senge spandex latex (mafuta pamusoro / girazi pamusoro), uchishandisa w ...Verenga zvimwe »
Post nguva: Kubvumbi-23-2020
Parizvino, nekuda kwekuputika kwemakoronavirusi matsva muChina uye pasirese, kambani yedu iri kunetsekana nezve izvi. Kubva pamakore edu mazhinji eruzivo mukugadzirwa kwemabhodhi uye mhando dzakasiyana dzekupfeka, isu takavhura mitsara miviri yekugadzira masutu ekudzivirira uye masiki. Yedu ...Verenga zvimwe »
Pashure pemakore anopfuura gumi echiitiko, isu takazvimiririra takagadzira yakangwara kukwidziridzwa vhezheni yeCAD ndiro yekugadzira system. Iyo software yehembe yehembe yekugadzira, kukodha, uye dhizaini. Iyo nyowani uye izere-inoratidzirwa nguvo CAD system. Iyi sisitimu inonyanya kukodzera iyo ...Verenga zvimwe »
Mushure mekuedza kwedu kuenderera, huwandu hwekutengesa hweedu spandex latex tights aendeswa kunze kumisika yeEuropean neAmerica yadarika US $ 1 miriyoni. Uku ndiko kubudirira kutsva munhoroondo yekutengesa. Ticharamba tichiwedzera nekuvandudza zvigadzirwa zvedu kuitira kuti zvigadzirwa zvedu zvinyanye kufarirwa. ...Verenga zvimwe »